Blog – Open History Pathein
Open History Pathein
Open History Myanmar
People – လူပုဂ္ဂိုလ်များ
Cityscapes – မြို့ပြ၀န်းကျင်များ
Documents – မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ
Timetable For Parnein Exhibition
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေမိတ်ဆက်၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် Pathein Umbrella & Thanakha Contest Introduction
ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေ Open History Project
၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့က မြို့တွေမှာစပြီးတော့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မကျင်းပခင် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ယဥ်ကျေးမှုကိုအခြေခံတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မကွေးမြို့မှာစပြီးတော့ သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုစပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီး ဘားအံရောက်တဲ့အခါမှာ ဘားအံမှာကျတော့ သူတို့ရဲ့လက်ယက်ထည်တွေ၊ စက်ယက်ထည်တွေ၊ ချည်မျှင်နဲ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတွေ အင်မတန်မှထွန်းကားတာလည်းတွေ့ရတယ်။ အင်မတန်မှ အရောင်အသွေးစုံလင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘားအံမှာရောက်တဲ့အခါမှာ ဆင်ယင်မှုပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာဖြစ်တဲ့ အဆင်အကွက်တွေကို မော်ဒန်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြတဲ့ ဖက်ရှင်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ စပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း ကျွန်တော်တို့က ယဥ်‌ကျေးမှုကိုအခြေခံတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျွန်တော်တို့ ထားဝယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က ထားဝယ်ရိုးရာမေပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထားဝယ်ရိုးရာမေပွဲတော်ကတော့ မကွေးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခါမှာ သနပ်ခါးမေဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထားဝယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတာက ထားဝယ်က သနပ်ခါးကိုပဲလိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ သနပ်ခါးနဲ့ အလားတူတဲ့ သစ်သားတွေကိုလည်း သွေးပြီးတော့လိမ်းတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ တောင်နံကြီး၊ သစ်နို့တို့လိမ်းတာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲ့မှာကျတော့ သနပ်ခါးဆိုတဲ့ခေါင်းစဥ်နဲ့ ဘောင်သပ်လို့မရတဲ့အတွက် ထားဝယ်ရိုးရာမေဆိုပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသီး၊ အပွင့်၊ အခေါက် အဲ့ဒါတွေနဲ့လိမ်းခြယ်ပြိုင်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင် ထားဝယ်ရဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီဝတ်ဆင်ထားတာကိုမှ သနပ်ခါးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သစ်နို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်နံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်လိမ်းခြယ်ပြီးတော့မှ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှ စည်ကားသိုက်မြိုက်တဲ့ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုသိမ်ကိုစဥ်းစားတဲ့အခါမှာ ပုသိမ်က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး‌ရော၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးရောသိတာက ပုသိမ်မှာပုသိမ်ထီးထုတ်လုပ်တာက အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ ပုသိမ်ထီးဟာ တကယ်တမ်းဆိုရင် ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထီးလိုအပ်ချက်၊ မိုးတွင်းရော၊ နေပူတဲ့အချိန်ရော ထီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းပေးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပုသိမ်ထီးရဲ့ကျော်ကြားမှုက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ ရှင်တွဲပြီးတော့ ကျော်ကြားတဲ့ ကျော်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ပုသိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်နဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်း Covid 19 အခြေအနေကြောင့် တကယ့်ကိုစည်စည်ကားကားနဲ့ လူအများကြားမှာ ကျင်းပရမယ့်ပွဲဖြစ်ပေမယ့် အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ ပုသိမ်မြို့ကနေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေးငယ်အများစု ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်ကြပြီးတော့မှ ဒါကိုကျွန်‌တော်တို့က ရွေးချယ်ပြီးတော့ ဆုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဓလေ့နှစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ ပုသိမ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ပုသိမ်ထီးဆိုပြီးတော့ အင်မတန်မှ ကျော်ကြားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခု ဓလေ့တစ်ခုလည်းရှိသလို သနပ်ခါးကိုလည်း မက်မက်စက်စက်လိမ်းကြတဲ့ မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုကိုလည်း ဒီနေရာမှာတင်ထားပါတယ်။ ဝိုင်းပြီးအားပေးကြည့်ရှု့ကြပါဦးလို့ ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကဗျာမြို့တော်၊ ကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲမိတ်ဆက် Introduction of Poetry Recital, Pathein, Open History Project
၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ ပုသိမ်မြို့က အစကတည်းက ကဗျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျော်ကြားတဲ့ ကဗျာဆရာတွေအများအပြားထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုသိမ်မြို့ကို ကဗျာမြို့တော်လို့ တင်စားပြောဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ရဲ့ ကဗျာမြို့တော်အစီအစဥ်မှာ ပုသိမ်မြို့က ကဗျာရွတ်ဆိုတင်ဆက်မှုကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ မြို့တစ်မြို့မှာရှိနေတဲ့ အနုပညာနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့သူတွေ၊ အနုပညာချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အသိအမှတ်ပြုလာအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ စီစဥ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာကပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို မျှဝေနိုင်ကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့ ပို့စ်ကဒ်များမိတ်ဆက် Pathein’s Postcards Introduction, Open History Project; 2020
၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။
ပို့စ်ကဒ်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မျှဝေဖို့အကောင်းဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပို့စ်ကဒ်ခေတ်ဆိုတာရှိခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ အသုံးပြုမှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ပို့စ်ကဒ်အဟောင်းလေးတွေ ပြန်ကြည့်ရတာ အရသာရှိသလို အချိန်ကာလတစ်ခုကိုလည်း အမှတ်တရဖြစ်စေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ ပို့စ်ကဒ်တွေပို့ကြတာ အခုအချိန်အထိ ခေတ်စားနေတုန်းပါပဲ။ စာပို့တိုက်စနစ်မပျက်သေးတဲ့သဘောပါ။ ကျွန်တော်တို့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မှာ မြို့တစ်မြို့ရဲ့ အမှတ်တရပို့စ်ကဒ်တွေ ထုတ်ဝေပြီး လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ရဲ့ အမှတ်တရခံစားချက်တွေကို ရေးပေးဖို့ ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘားအံ၊ ထားဝယ်၊ ပုသိမ်နဲ့ မိတ္ထီလာမြို့တွေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့စ်ကဒ်လေးတွေကို ရရှိတဲ့သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မိမိတို့၏အထင်အမြင်များရေးသားကာ ပြန်လည်ပေးပို့ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများမိတ်ဆက် Famous People of Pathein Intorduction, Open History Project; Pathein
၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ ရှေးခေတ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ပုသိမ်မြို့ဟာ အဖက်ဖက်က ထူးချွန်ထင်ရှားသူတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျော်အမော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ အထ္တုပ္ပတ္တိကိုပြုစုသူကိုဇော်မင်းထွတ်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြားထားပါတယ်။ အတုယူစရာ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တွေရဲ့အကြောင်းကို လေ့လာရင်း ဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ရဲ့ အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၀၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မိတ်ဆက် Introduction to Open History Project; Pathein City
၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကျင်းပဖို့ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကတည်းကစပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ဟာ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေကိုစုဆောင်းပြီး မြို့တစ်မြို့ရဲ့သမိုင်းကို ခင်းကျင်းပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့ခံတွေရဲ့ မိသားစုတွေမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ခွင့်တောင်း၊ ကူးယူပြီး လူထုကြားမှာရှိတဲ့သမိုင်းကို ထင်ဟပ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာ ပုသိမ်မြို့ခံတွေဖြစ်တဲ့ ကဗျာဆရာ ကိုညီမြင့်၊ ကိုဇော်မင်းထွတ်တို့က ဦးဆောင်ပြီး တစ်အိမ်တက်ဆင်းစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ထဲက သင့်တော်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရွေးချယ်ပြီး ပြသတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအခြေအနေကြောင့် အထင်ကရနေရာကြီးတွေမှာ ခင်းကျင်းမပြသနိုင်ဘဲ အွန်လိုင်းပွဲပဲကျင်းပရပါတယ်။ ဒီပြပွဲမှာ ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေပွဲတော်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲ၊ ကဗျာမြို့တော် ကဗျာရွတ်ဖတ်ပွဲ၊ အကျော်အမော်ပုသိမ်သားများနဲ့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းရှင်းလင်းပြသပွဲတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြသမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ဗွီဒီယိုအခုတစ်ရာကျော် ရိုက်ကူးပြသခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဗဟုသုတမြတ်နိုးသူများနဲ့ လူမှုသမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေ အားပေးကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းဓာတ်ပုံများနှင့် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် Old Photos and Open History Project
၂၀၂၀၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်မိတ်ဆက် (Introduction to Open History Project; Pathein City) ၁၄ – ၁၈ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၂၀ ပြပွဲရက်များတွင် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါ။ Photography is art. ဓာတ်ပုံဆိုတာ အနုပညာတစ်ခုပါ Photography is emotion. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ခံစားမှုတစ်ခုပါ Photography is record. ဓာတ်ပုံဆိုတာ မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ Photography is witness of history. ဓာတ်ပုံဆိုတာ သမိုင်းရဲ့ သက်သေတစ်ခုပါ Photography isamoment of circumstance. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ခေတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရဲ့ ထင်ဟပ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ် Photography is the existence of culture. ဓာတ်ပုံဆိုတာ ယဥ်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတစ်ခု The more we look on photography, the more we know about Humanity. ဓာတ်ပုံတွေကိုပိုပြီးကြည့်မိလေလေ လူသားတို့ရဲ့လူသားဆန်မှုကို ပိုပြီးနားလည်လေလေပါပဲ။
Aung Soe Min အောင်စိုးမင်း
Posted on September 1, 2020 October 11, 2020
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေ အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲမှတ်တမ်း -Thanakha Festival, Pathein
လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော ပုသိမ်ထီးနဲ့သနပ်ခါးမေပွဲတော်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ပုသိမ်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ယခုဗွီဒီယိုသည်စကာတင်ရွေးချယ်ထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် ပါဝင်သူများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ တစ်ဦးချင်းယှဥ်ပြိုင်ထားသော ဗွီဒီယိုများကိုလည်း ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမည်။
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံရိပ်များ ( ၂ ) Thanakha Contest, Open History Project Pathein
Open History Project ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေပွဲကို အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအဖြစ် ကိုဗစ် (၁၉) ကာလမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်အချို့ရဲ့ သနပ်ခါးကို ချစ်ခင်နှစ်သက်စွာ ပြိုင်ပွဲဝင်ကြပုံကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် သားသား ကူညီအားဖြည့်ထားတဲ့ သနပ်ခါးမေသီချင်းနဲ့အတူ ခံစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမပိုင်းတွင်ကျန်ရှိနေ သူများကိုလည်း ပြန်တင် ပေးထားပါသည်။
Posted on July 7, 2020 July 12, 2021
လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်အတွက် ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေကိုစုတဲ့ ခရီးမှတ်တမ်း
ပုသိမ်မြို့ ဓာတ်ပုံအဟောင်းတွေ ပြပွဲအတွက်ဓာတ်ပုံတွေ ရသလောက်စုဆောင်းချင်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုဗစ်ကာလ အခွင့် မသာတာကြောင့် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ ကြိုးစားပြီး စုဆောင်းကြည့်ဖို့ ပထမဆုံးခရီးလေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာ မစုဆောင်းဖြစ်ရင်ရေ‌ကြောင့် ၊ မီး‌ကြောင့် ၊ ရာသီဥတုကြောင့် အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ ပုသိမ်မြို့နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့ “မြို့ချောင်း” ဆိုတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာကို ကျွန်တော်တို့လူထုအမှတ် သညာအဖွဲ့သားတွေနဲ့ အတူ မြို့ခံလူငယ်လေးများရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးလေးက တဖွဲဖွဲ နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကားလေးကို အတူစီးရင်းချီတက်ခဲ့ ကြတယ်။ ပုသိမ်မြို့ နဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီရွာလေးက နာရီ၀က်လောက် ကားမောင်းရပါတယ်။ ကားပေါ် မှာတော့ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် ဒါရိုက်တာကိုအောင်စိုးမင်း၊ ရုံးအဖွဲ့သား ၄‌‌ ‌‌ယောက် ၊ မြို့ခံ ကိုဘိုဘို ၊ လူငယ်လုပ်အားပေးကူညီသူ ၃ ယောက် နဲ့ ကားဆရာ‌တို့ရယ်စကားလေးတွေပြောရင်း ပုသိမ့်ထဲကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းနေတဲ့ ချောင်းလေးတွေအကြောင်းကို မြို့ခံကိုဘိုဘိုက ပြောပြရင်း မိုး‌ရေထဲမှာ ကားလေးကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေး မောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့ ရဲ့ အ‌‌‌ရှေ့ဘက်လောက် ခပ်လှမ်းလှမ်းလေးလို့ယူဆရတဲ့ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ လမ်းဘေး ၀ဲယာမှာလည်းအသစ်အသစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အိမ်ရာတွေ ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်နေပါတယ်။ တိုးတက်လာတာနဲ့အတူ ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်း မနည်းလှပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သဘာ၀အလှတရားကြီးနဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေစေဖို့ ပေးခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုလည်း ခုတ်လှဲထားတာတွေလည်း မနည်းဘူး။ ဒါတွေကို မြင်ရတော့ နှမြောတသ ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က “သစ်တစ်ပင်ခုတ်ထောင်သုံးနှစ်”ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်‌လေးတွေကို လမ်းဘေးဝဲယာမှာ မကြာခဏဆိုသလို မြင်ဖူးမိပါတယ်။ ယခုအခါမှာ အဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး။ သစ်‌ပင်တွေ ခုတ်လှဲနေကြတာတွေလည်း မျက်စိရှေ့မှာအများကြီးပဲ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အစိုးရရုံး‌‌တွေ ၊ ၀န်ထမ်းအိမ်တွေကြားထဲကနေပြီး ကွန်းကရစ်လမ်းလေးအတိုင်း ဆက်မောင်းလာရာ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီမှာ လယ်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ သိပ်လှနေတဲ့ ရှုခင်းတွေကိုကြည့်ရင်း ကွန်းကရစ်လမ်းလေး အဆုံးမှာတော့ အိမ်လေးတွေကို စတွေ့ပါတော့တယ်။ မိုးလေးကလည်းတဖွဲဖွဲနဲ့ ကျွန်တို့လည်းအဲဒီရွာလေးကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ အိမ်လေးကို ဘယ်သူမှလည်း တစ်ခေါက်မှ မရောက်ဖူးဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ တွေ့တဲ့လူကိုမေးမယ်ပေါ့။ ရွာထဲမှာ လူအသွားအလာ သိပ်မတွေ့ရဘူး မိုးရွာနေလို့လားတော့ မသိ ဘူး။ အိမ်တွေကလည်း ခြံ၀န်းကအကျယ်ကြီးတွေဆို တော့ အိမ်ထဲက လူတွေကိုလည်းလှမ်းမမြင်ရဘူး။ ဒါနဲ့ ဈေးဆိုင်လေးတစ်ခုတွေ့လို့ ကျွန်တော်တို့ ကားလေးကို ရပ်လိုက်ကြတယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆိုင်လေးရှိတဲ့ အိမ်လေးဆီကို ကျွန်တော်သွားပြီး ဦးအောင်မြိုင်တို့ အိမ်ဘယ်အိမ်လဲဆိုတာကို မေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဦးအောင်မြိုင်က ဘုန်းကြီး၀တ်နေတယ်တဲ့။ ဒါ ကြောင့် သူ့အိမ်လေးကို လမ်းညွန်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဦးအောင်မြိုင်အိမ်ကကျော်လာခဲ့ပြီတဲ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်‌တော်တို့လည်း ကားလေးကို ပြန်လှည့်ပြီး သူညွှန်ပြတဲ့ လမ်းလေးအတိုင်း ဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ရွာလမ်းလေးဆိုတော့ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးပေါ့။ ခြံ၀န်းကြီးတွေကတော့အကျယ်ကြီးတွေ။ ခြံထဲမှာလည်း စားပင်သီးပင်တွေနဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတာပဲ ၊ အဲဒီလမ်းလေးအတိုင်းဆက်ပြီး မောင်းလာတာ လမ်းလေးအဆုံးမှာတော့ ခြံ၀န်းအကျယ်ကြီးတွေ့တယ်။ အဲဒီခြံ၀န်းထဲမှာတော့ အိမ် သုံး ၊ လေး အိမ်ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ‌ခြေတံရှည်လေးနဲ့ ပျဥ်ထောင်အိမ်လေးကိုဦးတည်ပြီး ဦးအောင်မြိုင်တို့အိမ်လားလို့ မေးလိုက်တော့ အထဲက အဖွားအိုတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။ ဦးအောင်မြိုင်က ဘုန်းကြီး၀တ်နေတယ်။ အဖွားကအမျိုးသမီးပါဆိုပြီး အသက်အရွယ်ကတော့ ခြောက်ဆယ်၀န်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ သန်သန်မာမာနဲ့ အဖွားကထွက်လာပြီးတော့ဖြေတယ်။ သူဘေးမှာ ၇ နှစ် (သို့) ၈ နှစ် အရွယ်ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်‌တော်တို့လဲ ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေ လာယူတာပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ “ဟုတ်ကဲ့အိမ်ထဲ၀င်ပါ”တဲ့။ ခုနက အဖွာနဲ့အတူပါလာခဲ့ ကလေးလေးက ထီးလေးကိုင်ပြီး မျက်နှာလေးက ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေပဲ။ ကျွန်တော်လည်း မနေနိုင်တာနဲ့ မီးမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ် လဲဆိုတော့ ရှေ့သွားလေး ကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ အိမ့်တန်ခူးနိုင်လို့ဖြေတယ်။ မီးမီးကဘယ်နှတန်းလဲဆိုတော့ နှစ်တန်းတဲ့။ ကျောင်းမတက်‌ရသေးဘူးလားဆိုတော့ ကျောင်းတွေက ဖွင့်သေးဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့အထဲကို ၀င်သွားကြာတာပေါ့။ ကလေးမလေးကို ဝိုင်းပြီးမေးကြပြုကြနဲ့ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ အဖွားကဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေ ထုတ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံတွေကိုကူးရင်း မြို့ချောင်းရွာလေးရဲ့အကြောင်း အဖွားကိုမေးမြန်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ဒီရွာလေးကဘယ်လိုရှိခဲ့တာလဲ။ ခုရော ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားပြီးလဲဆိုပြီး အရင်ကတော့ ဒီမြို့ ချောင်းရွာလေးက တစ်ရွာလုံးက အမျိုးတွေချည်းပဲတဲ့။ ယောက်ျားဘက်ကအမျိုးရယ် ၊ ကျွန်မဘက်က အမျိုးတွေရယ်နဲ့တဲ့။ အိမ်‌ခြေကလည်း အဲဒီလောက်မများဘူးတဲ့။ ခုတော့ အပြင်ကလူတွေ ရောက်လာကြတယ်တဲ့။ တိုင်းရင်းသာတွေရော ၊ တချို့မြို့ ပေါ်က ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေကလဲ ဒီဘက်တွေမှာ ခြံတွေ၀ယ်ပြီးတော့ အိမ်တွေဆောက်ပြီး ငှားစားကြတယ်။ လျှပ်စစ်မီးရတာလဲ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ အခုအချိန်က ကောက်စိုက်ရာသီဆိုတော့ ရွာထဲကရှိသမျှလူတော်တော်များများက ကောက်စိုက်ထွက်နေကြတယ်။ အဖွားတို့အိမ်မှာလည်း လူအငှားအ‌ယောက်ငါးဆယ်လောက်နဲ့ ကောက်စိုက်နေကြတယ်။ အဖွာတို့ကတော့ တောင်သူပဲလုပ်နေရတာပေါ့။ သမီးတွေကတော့ ကျောင်းဆရာမတွေ။ သူတို့တာ၀န်ကျတဲ့ဆီမှာပဲ ခုလိုပိတ်ရက်တွေတော့ပြန်ပြီး အိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုရွာလေးထဲကနေပြီး ကျောင်းဆရာမတွေ မွေးထုတ်ပေးတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီရွာလေးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို အဖွားကတစ်ဆင့် ပြောပြလို့ အားလုံး သိလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံ အဟောင်းလေးတွေကိုကူးရင်း ခုနကအိမ့်တန်ခူးနိုင်လေးကိုဝိုင်းပြီး မေးကြပြုကြ၊ မျက်နှာလေးပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ ‌ရှေ့သွားလေးတွေမရှိတော့ စကားလေးမပီတပီလေး မေးသမျှတွေကိုအကုန်ဖြေတယ်။ တအားလည်း သွ်တယ်။ ပြီးတော့အဖွားနားမှာ ကပ်ပြီးအဖွားကို ကြည့်လိုက် ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လိုက် ဒီလို့ နဲ့ ပုံလေးတွေကို ကူးပြီး အဖွားကို နှုတ်ဆက် ၊ အိမ့်တန်ခူးနိုင်လေးနဲ့အမှတ်ရပုံလေးတွေရိုက်ကြရင်းနဲ့ အဲဒီအိမ်လေးကနေပြီး ကားလေးဆီကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် ကားပေါ်တက်ပြီးခါစလေးမှာ အသံလေးတစ်သံ ထွက်လာတယ်။ “တာ့တာ” တဲ့။ ဘယ်ကအသံလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ခုနကနဲ့ ခြံ၀န်းကြီးထဲကနေပြီး နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့နီး တဲ့ အိမ်လေးပေါ်ကနေ အိမ့်တန်ခူးနိုင်လေးက လှမ်းနှုတ်ဆက်တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူကို ပုံလေးတစ်ံလှမ်းရိုက်လိုက်ပြီး အားလုံးက သူကိုဝိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ လူုအမှတ်သညာပွဲတော် ဓာတ်ပုံအဟောင်းလေးတွေစုတဲ့ ခရီးစဉ်လေးတစ်ခု ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ပုသိမ်မြို့ခံ လူငယ်များ နှင့် လူထုအမှတ်သညာ အဖွဲ့သားတို့ ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ
လူထုကြားက သမိုင်းမှတ်တမ်းများအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
ပုသိမ်ထီးနဲ့ သနပ်ခါးမေ – ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံရိပ်များ
Open History Project – Pathein